IVA 6T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 6T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ , ၄၀,၀၀၀ USD ဒျေါလာအောကျ
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA6T
IVA6T 6ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) is produced according to the most advanced technology in 2019.
IVA6T ၆ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Video of IVA6T 6Ton Stainless Steel Tube ice making machine
IVA6T 6ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) with 100% new components isaperfect choice for the smart manufacturer.
၁၀၀% သစ်သော အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက် IVA 6T ၆ တန် ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)က ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
For price reference of tube ice making machines, ranging from mini machines to industrial machines, go to: https://vietan.vn/may-lam-da-vien
Currently, in response to the growing demand for ice due to hot weather, numerous ice making machine facilities, including poor quality ones, have appeared.
ယခုအခါ ရာသီဥတုက ပူပြင်းလာပြီး ရေခဲကို အသုံးပြုသူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အရည်အသွေးနိမ့် ရေခဲပြုလုပ်သောစက်များ အပါအဝင် ရေခဲစက်တွေ ပေးထွက်နေပါတယ်။
Therefore, the business with great demands of ice such as the restaurants, supermarkets, restaurants, hotels, bars, or households often choose ice making machines to ensure the ice quality and save cost.
ဒါကြောင့် ရေခဲ လိုအပ်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စူပါမားကပ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဘားများ၊ အိမ်ထောင်စုများက ရေခဲကွာလတီကို သေချာစေပြီး အကုန်အကျသက်သာစေဖို့ ရေခဲထုတ်စက်တွေကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
Asaleading company in the bottled water industry with nearly 10 years of experience in supplying exported stainless steel ice making machines, Viet An’s products have been widely chosen by the big corporation such as Samsung, Shinha Vina, Diana, etc. In this article, we are going to introduce the IVA6T 6ton exported stainless steel ice making machine.
ရေသန့်ဘူးစက်ရုံမှာ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်တွေကို တင်ပို့ပေးတာ ၁၀ နှစ်နီးပါး ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တာနဲ့အညီ Viet An မှ ပစ္စည်းတွေကို Samsung, Shinha Vina, Diana စတဲ့ ကုမ္ပဏီများမှ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့က IVA 6T ၆ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Great advantages when using Viet An’s IVA6T 6ton Stainless Steel Tube ice making machine
Viet An ရဲ့ IVA 6T ၆ တန် စတိန်းလက်စ်စတီးကို အသုံးပြုသောအခါ ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
Viet An was established under the business license No. 013039593 by Hanoi Department of Planning and Investment on August 4, 2009. Third amendment registration was on November 4, 2015, under the business license No. 0102966635. Asaleading enterprise with nearly 20 years of experience in importing, manufacturing and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc., we’ve always tried our best to apply the most advanced technology (American, European, Japanese technology) into the production. Thanks to our unceasing efforts, we have achievedavariety of honorable prizes and certificates:
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် Hanoi စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး ဌာနမှ Viet An ကို စီးပွားရေးလိုင်စင် အမှတအ ၀၁၃၀၃၉၅၃၉ အောက်တွင် တည်ထောင်စေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေး လိုင်စင်အမှတ် ၀၁၀၂၉၆၆၃၆ အောက်တွင် ​တတိယမြောက် ပြင်ဆင်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးလေမှုတ်စက်များ၊ ရေစစ်လိုင်းများ၊ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်များ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ နှစ် ၂၀ နီးပါး အတွေ့အကြုံဖြင့် ဦးဆောင် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Certificate of TMTH Viet Nam Association for Anti-counterfeiting and Trademark Protection (VATAP) for actively participating in the movement on November 29, 2016;
Information about IVA6T 6ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New)
IVA 6T ၆ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)အကြောင်း အချက်အလက်
Our IVA6T 6ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) is mainly produced for exporting. Are you wondering why we just produce our machines for exporting? Because the prices offered by Viet An are often higher than other local brands due to 100% new components. The customers in foreign countries tend to use 100% new products. Meanwhile, Vietnamese often prefer cheap prices. Despite this fact, we still introduce our products in Vietnamese market to bring the customersadeep understanding about the reason for our prices.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IVA 6T ၆ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)ကို တင်ပို့ရန် အဓိက ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်တွေကို ဘာကြောင့် တင်ပို့ဖို့ ထုတ်လုပ်လဲဆိုတာ သင်သိချင်ပါသလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Viet An မှ ပစ္စည်းတွေက ၁၀၀% အစိတ်အပိုင်း အသစ်တွေဖြစ်တာကြောင့် ပြည်တွင်းက အခြားစက်တွေထက် ဈေးများတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူသူများက ၁၀၀% အသစ် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုချင်ကြပါတယ်။ သို့သော် ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေကတော့ ဈေးပေါတာကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုနားလည်နိုင်ဖို့ ဗီယက်နမ် ဈေးကွက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
ဖိသိပ်စက် (ခတ်ထားသော) (၁၀၀% အသစ်)
Only in Viet An, we apply 100% new liquid and gas separation system for the ice making. The air compressor is used for the ice-making machine. The liquid and gas separation system is designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life. The liquid and gas separation system is designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life. As you might know, the ice making machines using old technology often have lengthy designed lines. However, with Viet An’s innovation, the traditional lines have been improved to be much more compact and convenient.
Viet An ကသာလျှင် ရေခဲထုတ်ရာတွင် အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ် ၁၀၀% အသစ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ လေဖိသိပ်စက်ကို ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ သူက လေအေးကို စုပ်ယူပြီး လေပူကို စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို လေလက်ကြားမှ အရည်တွေကို ခွဲထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒါမှ လေလမ်းကြောင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်မှာ သေချာစေပါတယ်။ သို့မှသာ စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး သက်တမ်းကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Outstanding advantages: The bucket charging motor - blade set is 100% new.
Above are some of the latest technologies typically used for Viet An’s ice making machines. They make the production process much quicker, convenient and cost-effective. These exclusive technologies are only available in Viet An. Thanks to the great benefits of these products, they have been widely chosen by the customers despite the high prices. With these new devices, you can remarkably save energy and reduce production time. With these new machines, you can remarkably save energy and reduce production time.
Advanced technology application. Save energy cost.
ခေတ်ရှေ့ပြေးသော နည်းပညာ အပလီကေးရှင်း- အင်နာဂျီကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချနိုင်တယ်။
The pump system (100% new) is made of stainless steel with the exclusive technology.
အီလက်ထရောနစ် အဆို့ စနစ်ကို Finland ရှိ Danfoss ကုမ္ပဏီမှ တင်ပို့ထားပါတယ်။
ဒီစက်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးက ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
After just above2years, the price of the old machine +2years of electricity cost will be equal or higher than the price of 100% new machine +2years of electricity cost. This does not include the expenses to resolve the errors during the operation with the old machine. During these2years, the old machine can generate stable performance while the old one cannot assure this. Even if there are no errors during the first2years, until the 3rd year, the old machine will surely operate much better than the old one. With above information, it’s your right to chooseanew or old machine. With above information, it’s your right to chooseanew or old machine.
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA6T Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
Accessories (optional - purchase separately)အဆင်တဆာများ( သပ်သပ်ဝယ်ရသော)
Tube ice sizes
As each ice making machine can be used to produce ice ofaspecific size, make sure to pre-order your desired size. IVA 0.8T 800KG Stainless Steel Tube ice making machine can be used to produce ice of following sizes:
ရေခဲထုတ်စက်တစ်ခုချင်းစီက တိကျသော အရွယ်အစားတစ်ခုကို ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ သင်နှစ်သက်တဲ့ အရွယ်အစားကို ကြိုတင်မှာယူဖို့ သေချာပါစေ။ IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် စတိန်းလက်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို အောက်ပါ ရေခဲ အရွယ်အစားတွေ ထုတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Type 1 is designed at 44/47mm dimension which is preferred by the Southern people for beer or soft drinks. With this dimension, the melting time will be longer.
အမျိုးအစား ၁ ကို ၄၄×၄၇ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး တောင်ပိုင်းက လူတွေက ဘီယာ၊ အဖျော်ယမကာတွေအတွက် သုံးကြပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားနဲ့ဆိုရင် ရေခဲက လျင်မြန်စွာ ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Type2is designed at 34/38mm dimension which is preferred by the Northern people and is suitable for different purposes. This dimension is not too big and the melting time is not too short.
အမျိုးအစား ၂ ကို ၃၄×၃၈ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး တောင်ပိုင်းက လူတွေက ပိုနှစ်သက်ကြကာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အရွယ်အစားက သိပ်မကြိးသလို ရေခဲပျော်တဲ့အချိန်ကလည်း အရမ်းမတိုပါဘူး။
Type3is designed at 18 /23 / 27mm dimension which best suits coffee, fruit juice, etc. Though the ice melts quicker than2above sizes, this type can make the drinks cool very quick.
အမျိုးအစား ၄ ကို ၁၈၊၂၃၊၂၇ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ကော်ဖီ၊ အသီးဖျော်ရည် စတာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အပေါ်က အရွယ်အစား ၂ ခုထက် ပိုပြီး အရည်ပျော်မြန်ပေမယ့် ဒီအမျိုးအစားက သောက်စရာတွေကို လျင်မြန်စွာ အေးစေပါတယ်။
On the market, there are many types of counterfeit ice machines that do not guarantee quality. In addition, many establishments produce ice according to manual processes, which do not ensure food hygiene and safety requirements. So, please pay attention to beasmart consumer by reaching official offices/branches to buy your desired products.
ယခုအခါ ဈေးကွက်မှာ ပစ္စည်းအတုတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေက ပစ္စည်းအစစ်တွေ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုံး၊ ရုံးခွဲတွေကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ စက်တွေက ဈေးနှုန်းလည်း ကွဲပြားကြပါတယ်။ ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်းက စက်ရဲ့ ကွာလတီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲပါတယ် ( ၁ သန်းမှ သန်းရာချီထိ ကွဲပြားပါတယ်။ Viet An ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းကွာလတီကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
Besides the standard management of international quality ISO 9001:2015 first and only ice cube machine Inox VA5T power saving in Vietnam in 2015, Vietnamese police also receivedacertificate or certificate of trademark exclusive product lines RO.vv ... pure water filter, the typical customer at home and abroad by Vietnamese Security must mention as the Vietnam dairy products Joint stock company (Vinamilk), company shares Diana North security, ltd samsung Vietnam, Saigon Lusun Co., Ltd. Shinhan Vina
An ongoing 2012 Vietnam signed the big contract value chain provides water purification for small scale industries such as textiles. Which typically contract with Winners Vina Co., Ltd. of Korea in Thanh Hoa, CEDO Korean company in Bac Ninh, Goshi Thang Long Company in Gia Lam, Hanoi. Vietnam India to becomeapartner, you trusted for businesses owl foreign investment from organizations like the World Bank, ODA, FDI in the field of providing products for water treatment.
2013, Vietnam An contractors for Vinamilk Company Tuyen Quang, supply lines and water treatment filters in livestock.
In addition to the industrial machines, we also distribute and advise the installation of tube ice-making machine, filling system, etc. for the customers nationwide. Our products are imported from developed countries such as Japan, America, Korea, etc and bring back to us millions of USD revenue per year.
Contact us now to get our high-quality 6ton ice-making machine with the best price. We commit to bring you the best products at the most convenient prices. Your trust is the greatest joy for us.
အရည်အသွေးမြင့် ၆ တန်ရေခဲထုတ်စက်ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာကြောင်း အာမခံပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။
Hỏi đáp & đánh giá IVA 6T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)